Hackers Hack kanjani - Ukukhathazeka kobuchwepheshe be-Semalt
Kuzo zonke izinto ezifakwe kwi-intanethi ezihilela iseva, ngokuvamile kubungozi bokukhwabanisa. II-intanethi ihlanganisa umsebenzisi othumela nokuthola ulwazi kuseva. Ngenxa yalokho, iningi lentuthuko yewebhu igxile kumsebenzisi futhihhayi ukuzinza kwesistimu. Ngenxa yalesi sizathu, abantu badala iwebhusayithi ye-e-commerce engenza kuphela le misebenzi ngendlela enhle,ukunganaki iqiniso lokuthi abantu abanezinhloso ezigulayo bangasebenzisa leli thuba. Ngenxa yalokho, ukuphepha kwewebhusayithi yakho kanye nokweamaklayenti akho ancike ekusebenzeni ngempumelelo ukuthi ungakwazi ukulwa nemizamo ye-Hack.
Kunezindlela eziningi abantu abaqhuba ngayo ama-hacks abo. Umgomo wabaHlengi 'kuthola ukungena ngemvume okungagunyaziwe ku-intanethi futhi uthole ukufinyelela kolwazi okungenjalo oluhlala kuseva leseva. Kwezinye izimo, bangazamaulethe iwebhusayithi phansi usebenzisa amabhodet noma ezinye izindlela ezinonya. Abantu abaningi abenza amawebhusayithi afana namabhulogi noma amasayithi e-commerce azibuzaukuthi abaduni benza kanjani ama-hacks abo. Ngesinye sokusetha izindlela nezinqubo zokuqeda abaduni, kunesidingo sokuqonda ukuthi badonsa kanjaniHack amawebhusayithi.
uJack Miller, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt ,ucacisa ezinye zezindlela, abaduni abasebenzisa, njengezansi:
Ukuhlasela kweSpanish Site (XSS)
Lawa amakhodi asebenzisanayo angasebenza ku-server futhi ahlasele umuntu osengoziniikhompyutha..I-hacker iqala ngokukhohlisa umsebenzisi ngokuchofoza isixhumanisi esiyingozi. Lesi sixhumanisi senza iskripthi kusiphequluli, laphoU-hacker uthola iziteshi zokusebenzisa ezinye izinyathelo. Ngokwesibonelo, i-hacker ingathatha yonke idatha yesiphequluli njengamaphasiwedi nesilondolozi. I-hackerungasebenzisa futhi izici zesiphequluli njengemakrofoni kanye nekhamera yewebhu ngaphandle ukuvuma kwesisulu.
Lokhu kusetshenziselwa ukusebenzisa inselelo yezilimi ezithile zokuhlela. Lokhuukuxhaphazwa kakhulu kusebenza kumawebhusayithi anesakhiwo sekhodi esibi. Isibonelo, isayithi le-PHP lingangena ngaphansi kwe-SQL injection attack.I-hacker kuphela izama ukuthola i-website ye-website futhi ithola yonke idatha. Ulwazi olufana nedatha yenkampani, ukungena ngemvume komsebenzisi, kanye nekhredithiUlwazi lwekhadi luba yingozi ngale ndlela. Ngaphezu kwalokho, umhlaseli angalanda futhi, alayishe noma ahlele amasimu kumakholomu nemigqayedatha oyisebenzisayo. Kwezinye izimo, abaduni bangase basebenzise ukuhlelwa kwePakethe, lapho beba idatha njengoba idlula phakathi kwesevanomsebenzisi.
Uma senza amawebhusayithi, asihluleki ukuqaphela abalahleki abangase bakwazi ukulahlekelwasigqoke amabhizinisi ethu e-commerce. Ngenxa yalokho, amawebhusayithi amaningi akhiwe ukuze akhonze ikhasimende ngaphandle kwengqondo. Abaqaphi bangakwazi ukufezaizinqubo eziningi kwiwebhusayithi, iningi lawo lingase libandakanye ukweba, ukukhwabanisa noma ukukhishwa kolwazi oluyimfihlo. Ngamafuphi, ukuphepha kwakhoindawo, kanye namakhasimende akho, kuxhomeke kuwe, umnini nomphathi. Iningi lezinjini zokusesha injini (SEO) ekuhloswe ngalo ekukhuleniukufaneleka kwewebhusayithi kanye nokubonakala kwe-SERP. Abahlaseli bangakwazi ukwehlisa isayithi ngalokhu. Ukwaziswa ngezindlela zokukhwabanisakungasindisa ukulahleka kwebhizinisi okuphawulekayo kanye nokwandisa igunya lesikhulu kuzinjini zokusesha ngenxa yokuphepha.